မီးလောင်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့ ဆရာတော် ဦးတိက္ခဥာဏကို မတ်လ ၁၆ ရက်နေ့က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာ တွေ့ရစဉ်
လက်ပံတောင်းတောင် ကြေးနီစီမံကိန်းအနီးမှာ ရဲတပ်ဖွဲ့က အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းတာကြောင့် မီးလောင်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တဲ့ သံဃာတော်နှစ်ပါး က ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးနဲ့ မြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့ကို အရေးယူပေးဖို့ တိုင်ကြားတာကို ဆားလင်းကြီး မြို့မရဲစခန်းက ပယ်ချလိုက်ပါတယ်။
ဆားလင်းကြီးရဲတပ်ဖွဲ့က ငြင်းပယ်ခဲ့တဲ့အကြောင်း သံဃာ ၂ ပါးကို ကိုယ်စားပြုပြီးတိုင်တန်းခဲ့တဲ့ ကိုနေသီဟ က အခုလို ပြောပါတယ်။
"သူတို့လက်ခံမှု မခံမှုကို အထက်အဆင့်ဆင့် ကိုတင်ပြတယ်၊ တင်ပြပြီးတော့မှ ဘာကြောင့် လက်မခံတယ် ဆိုတဲ့အကြောင်းကို အကြောင်းပြန် လာတယ်၊ သူတို့ရေးထားတဲ့ ပုဒ်မတွေကိုတော့ နားမလည်ဘူး၊ ဒါပေမဲ့ သူတို့က ပြည်သူ့ ဝန်ထမ်းတွေဖြစ်နေတယ်၊ ဥပဒေနဲ့မညီတဲ့ လှုပ်ရှားမှုတွေကို နှိမ်နင်းတဲ့အခါမှာ သူတို့အနေနဲ့ အကာအကွယ်ရှိတယ်ပေါ့၊ ဒါကြောင့်မို့လို့ အမှုဖွင့်လို့ မရပါဘူးဆိုတာ အကြောင်းပြန်တယ်၊ ဥပဒေကျွမ်းကျင်တဲ့သူတွေနဲ့ ထပ်ပြီးတိုင်ပင်ဦးမယ်ဗျ"
ပြီးခဲ့တဲ့ ၂၀၁၂ ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလ ၂၉ ရက်နေ့ မနက်လင်းအားကြီးအချိန်မှာ သပိတ်စခန်းကို ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေက မီးလောင်ဗုံးတွေသုံးပြီး ဖြိုခွင်းခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အဲဒီအကြမ်းဖက်မှုကြောင့် ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး မီးလောင်ဒဏ်ရာတွေရရှိခဲ့တဲ့ ဆရာတော် ဦးတိက္ခဥာဏနဲ့ ဦးဝိသုဒ္ဓတို့ကိုယ်စား ဦးတိက္ခဥာဏရဲ့သားဖြစ်သူ ကိုနေသီဟက ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စု ဝန်ကြီး၊ မြန်မာနိုင်ငံ ရဲတပ်ဖွဲ့တို့ကို အရေးယူပေးဖို့ ပြီးခဲ့တဲ့ မတ်လ ၁၁ ရက်နေ့က ဆားလင်းကြီးမြို့နယ် မြို့မရဲစခန်းမှာ တိုင်ကြားခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
ဆရာတော် ဦးတိက္ခဥာဏဟာ ခြေထောက်နှစ်ဖက်လုံးမသန်တော့ဘဲ ဆရာတော် ဦးဝိသုဒ္ဓက အရေပြားဝေဒနာ ခံစားနေရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
လက်ပံတောင်းဒေသခံတွေ ၀မ်ပေါင်ကုမ္ပဏီနဲ့ တွေ့ခွင့်တောင်းဆို
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်နဲ့ မုံရွာဒေသခံတွေ တွေ့ဆုံပွဲ ဝေဖန်မှုတွေရှိ
၁ဝ၅ မိုင်က သီလရှင်သင်ပညာရေးကျောင်း
စိုက်ခင်းတွေပျက်စီးလို့ ဝမ်ပေါင် ကုမ္ပဏီကို အရေးယူဖို့ ဒေသခံတွေ တောင်းဆို
လက်ပံတောင်းတောင် စီမံကိန်းက အက်ဆစ်ငွေ့တွေကြောင့် သီးနှံပင်ပျက်စီးမှု စစ်ဆေးနေ
ရခိုင်ပဋိပက္ခနောက်ပိုင်း တရုတ်- မြန်မာ စီးပွားရေး စီမံကိန်းများ
လက်ပံတောင်း ကြေးနီစီမံကိန်းကထွက်တဲ့ အက်စစ်ငွေ့တွေပျံ့နှံ့မှု သီးနှံပျက်စီးမှုရှိ
ဆရာတော် ဦးသောဘိတ နဲ့ တွေ့ဆုံမေးမြန်းချက်
ဦးသောဘိတနဲ့ တပ်မတော်အမှု အာမ,ခံပေး
တပ်မတော်ကိုဝေဖန်မှုနဲ့ တရားစွဲခံရတဲ့ ဘဝအလင်းဆရာတော်
ဘယ်လောက် စွဲစွဲ သူတို့ကို တရားစွဲ လို့မရအောင် ခြေ/ဥ မှာ ကြိုပြီး ပြဌါန်း ထားပြီးသား။ ပြည်သူ ကိုသာ ရက်ရက်စက်စက် သတ်ရဲတာ သူတို့အလှည့် ကျ မှာ ကျတော့ သောက်ကြောက်ကြီးလွန်းလို့တိုင်းပြည် ဆင်းရဲတွင်း နစ်နေတာတောင်မှ နေပြည်တော် ကို အတင်းဆောက်ပြီး ပြေး တာ ကြည့်လေ။
Mar 25, 2015 02:09 PM
စစ်ဗိုလ်တွေ တရားဥပဒေကိုဖင်ခုထိုင်ပြီး ပါးစပ်က ပြောသမျှ “ တည် ဆဲ ဥပဒေ”တွေ ဖြစ်နေပြီး ၊ အထက်အမိန့်”အရ ပစ် ခတ် ဖမ်းဆီး ရိုက်နှက် အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်း နေ တာ လုပ်နည်းလုပ်ထုံး ဖြစ် တာ ကြာပကော ။
Mar 24, 2015 09:33 PM
၀န်ကြီးက တာဝန်ရှိသော်လည်း တိုက်ရိုက်မပတ်သက်ပါဘူး။ ဦးပိုင်ကို စွဲသင့်တာပါ။ ၀မ်ပေါင်ကို အဆစ်ထည့်လို့ရပါတယ်။ သာသနာရေးဝန်ကြီးကို “လျစ်လျူ ရှု မှု”နဲ့ စွဲနိုင်ပါတယ်။ (ပုဒ်မ ၁၈ ပေါ့)
During the recent interview with the BBC, Mg Thein Sein said Burma is inching steadily towards democratic reforms. It's democratic when the government throws people in jail for bogus reasons but how is that democratic whenamonk can't sueagovernment minister? It'sajoke.
Mar 24, 2015 02:21 PM
တိုင်ချက်ကို ကုလသမဂ္ဂနဲ့ နိုင်ငံတကာခုံရုံးမှာ ဖွင့်ရပါတယ်။